Brezila: Mitoroka ny fahamaizan’ny ala an-tanan-dehibe ireo mpitoraka blaogy maro · Global Voices teny Malagasy
Brezila: Mitoroka ny fahamaizan'ny ala an-tanan-dehibe ireo mpitoraka blaogy maro
Voadika ny 01 Janoary 2010 6:43 GMT
Sary: Luiz Ramos, avy amin'ny blaogy ramosforest. Hoy izy: “Matin'ny Mpamofo afo ny afo. Simba ny zavamaniry teo an-toerana. Tsy mbola fantatra izay tena fototry ny afo, nefa, mety ho nataon'ireny olona mpandehandeha amin'ireny làla-masaka ireny ilay izy.
Ny harivan'ny 7 Sptambra lasa teo, nisy afo lehibe nandrava an'i Pedra da Gávea, ao amin'ny Tijuca National Park, any Rio de Janeiro. Vavolombelona nahita maso izany daholo ny manodidina ny tanàna, toy ny tany Arpoador, Ipanema, Leblon, São Conrado ary Barra da Tijuca. Tokony ho tamin'ny 10 alina teo no nanomboka ny firehetana, tamin'ny ilany atsinanan'i Pedra da Gávea teny amin'ny tendrony farany ambonin'ny havoana, saingy noho ny rivotra nanampy trotraka, haingana be tokoa ny nitàrany hatrany amin'ny ilany andrefana, izay azo notazanina hatrany Barra da Tijuca. Ora 10 teo no nirehetan'ny ala.
Ny blaogy Maiti Nepal [pt] dia nandefa vaovao andro vitsy taty aorian'ilay zava-doza ary koa nametraka rohy iray mankany amina video mampiseho ilay afo:
Niverina indray tao Pedra da Gávea ny vondrona mpamono afo avy any amin'ny faritra atsimon'i Rio de Janeiro io maraina io, Talata 8 Septambra, mba hanamarina sao mbola misy otrik'afo tsy maty any ho any. Ny harivan'ny Alatsinainy 7 Septambra, niverina indray ny afo tao an'ala, tanaty faritra sarotra hidirana. Voafehy ny afo, saingy raha ny filazan'ireo mpamono afo dia mbola misy pitik'afo mitsitokotoko tavela ihany.
Ilay Solombavam-bahoaka ao Rio de Janeiro, Fernando Gabeira dia mamaritra anaty andalan-teny vitsivitsy ao amin'ny blaoginy [pt] ny fihetsem-pon'ireo vavolombelona nanatri-maso ny firehetana. Hoy izy mikasika ny sary iray nalain'ilay mpaka sary miasa ho an'ny tenany, Maria Elisa Franco, iray amin'ireo olon-tsotra marobe nandany ny alina nibanjina ny afo sy naka sary avy eny am-baravarankelin'izy ireo:
Ny hakanto sy ny halozàn'ny afo tao Pedra da Gávea.
Tohina ireo mpamaky ny gazety O Globo tamin'ny Talata 8 Septambra: nisy sary iray kanto tokoa naneho ireo kirihitra miredareda manodidina an'i Pedra da Gávea, nanova ilay tontolo toa Carioca hanjary toy ny volkano.
Carlinhos de Ipanema [pt] dia nanararaotra ny zava-miseho mba hisainana ny hoavy tsy azo antoky ny zanak'olombelona:
Andro vitsy lasa izao, nanamarika ahy ny sarin'ny Sugar Loaf namoaka ranon'afo mitsotsorika amin'ny valahany ary dia tsapako fa mipetraka ambony vata feno vanja tokoa isika, mijaly noho ny tsy rariny atao azy ny Tany, ary sahala amin'ny fandravàny ny tranom-bitsika no andravàny ny sivilizasiona zara raha nivoatra, handefasany ny rano, ny rivotra ary ny afo mba hitakiany ny anjara faritra efa azy.
Ankehitriny, telo volana taorian'ny loza, toa zary adinon'ireo manampahefana sy ireo mpitoraka blaogy ny olana. Afa tsy ireo mpitoraka blaogy avy amin'ny Pão de Açúcar Verde [pt] manao izay ho afany amin'ny fanampiana, manangona vaovao momba ny asa fanarenana ny havoanan'i Sugarloaf ataon'ireo mpirotsaka antsitrapo. Ho asa farany nataon'izy ireo tamin'ity taona ity , ireo mpirotsaka an-tsitrapo dia nanadio ilay havoana kely teo anilan'ny Sugarloaf fantatra amin'ny hoe Morro da Urca. Afaka mirotsaka daholo ny rehetra te-ho mpikambana hanao ny asa amin'ny 2010:
Ny ezaka iarahanay manao dia isaky ny Alahady voalohany amin'ny volana foana, amin'ny 9 maraina ary ny toerana ihaonana dia ao Praça General Tiburcio, manoloana ny Praia Vermelha.
Tanatin'ny dimy taona niasana teo, vitanay ny nanova ny faharavàn'ny tontolo iainana hita tao. Noho ny toetry ny tany somary tsy dia mamokatra loatra, sady tsy dia lalina rahateo, niadana be ny fandroson'ny asa, saingy efa hita maso kosa ny vokany. […]
Ianao koa dia asainay mba handray anjara amin'ny ezaka iarahanay manana. Ny kely ataontsika ho fandraisana anjara dia efa mitondra fiovàna goavana sy mampihena ny fiantraikan'ny ataon'ireo mpihanika (Alpinistes) maro eo amin'ny faritra iasantsika. Ireo faritra manodidina ny Sugarloaf dia sahala amin'ny hoe ao ambadiky ny tokotany filalaovana ho an'ireo mpihanika ireo. Rariny loatra araka izany raha karakaraintsika, farafaharatsiny, ilay ambadiky ny tokontanintsika. Vitao ny anjarantsika. Mendrika izany ny planeta.
Pedra da Gávea, vatobe iray mitirintirina any amin'ny 842 metatra ambonin'ny ranomasina amin'ny tendrony farany ambony indrindra aminy, hita ao Floresta da Tijuca any amin'ny tanànan'i Rio de Janeiro. Sary: Paulo Afonso de A. Teixeira, avy amin'ny Wikimedia Commons
Ny Valanjavaboarin'i Tijuca National Park dia àla novolen'ny tànan'olombelona teny an-tendrombohitra ary ny lehibe indrindra amin'ny ala an-tànan-dehibe, ahitàna ny Alan'i Tijuca, ny Alan'i Paineiras – izay misy ny Kristy Mpanafaka eo ambonin'i Corcovado – ary Pedra Bonita – avy eny ny olona no mitsoraka midina amin'ny elon'aina [Deltaplane] . Mandrakotra faritra mirefy 32km² amin'ny Atlantic Rainforest izy io ary mihena andro aman'alina noho ny fibodoana tsy ara-dalàna ataon'ireo tsy manan-kialofana ao Vidigal sy Rocinha. Ankoatry ny fiarovana ny sisa tavela amin'ny Alan'ny Atlantika [Atlantic Forest], ilay Valanjababoary koa dia mitàna toerana lehibe amin'ny fiarovana ireo loharano, toy ny reniranon'i Carioca sy Maracanã mpamatsy ny filàn'ny tanànan'i Rio de Janeiro. Ny faritra ravan'ny afo koa dia toeran'ireo karazana hanitriniala [orchids] maro tsy fahita raha tsy ao an-toerana sy ireo bromeliads atahorana ho fongana.